Rappi 5.12.20181215-1222 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.12.20181215-1222 လြန္ခဲ့ေသာ7လက
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ Rappi
Rappi ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Rappi သင့်ရဲ့စျေးဝယ်, အမိန့်အစားအစာမလိပ်စာမဆိုကြင်နာစေရန်အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအမှုကို run ဖို့ Teller သွားမှ၎င်း, မိနစ်အားလုံးကိုသင်တို့အဘို့, သင့်နေ့လယ်စာယူမယ့်မနက်စာကောက်ကနေသင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာလိုအပ်သမျှသယ်ဆောင်ရန်သွားဖုံးမိန့် မှစ. ။
သငျသညျ IN မိနစ်အလိုအပ်သမျှ
ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုအတိုင်းအစာရှောင်ခြင်းတစ်အိမ်မှာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ သင်လိုချင်သောအရာကိုမေးပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ RappiTenderos မိနစ်ရှိစေသတည်း။ ကချိုမြိန်သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်လျှင်, ငါတို့သည်ပေးပို့ကာလ၌မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်နေကြသည်နေပါစေ။
တစ်နေရာတည်းတွင်သင်လိုအပ်သမျှကိုရယူပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဧရိယာထဲမှာအကောင်းဆုံးစူပါမားကက်, ဆေးဝါး, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စတိုးဆိုင်များ၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဆက်ကပ်။ သင်လိုချင်တာတွေကိုမတှေ့ဘူးဆိုရငျ, Antojo အဖြစ်တောင်းခံကျနော်တို့ကြွင်းသောအရာကိုပြုပါလိမ့်မယ်။
အသက် 30 စက္ကန့်အတွင်းသင်၏မှာယူမှုစေ
အကြှနျုပျတို့သညျတကယျ့ store မှာပါပဲကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုကို interface ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌အလိုတခုတည်းသောကြောင့်စင်္ကြံမှတဆင့် Walk သစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကဒ်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ငွေသား 24 နာရီတစ်ရက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိ။
သင်လက်လှမ်းမီသလောက်ကို AT BEST RAPPITENDEROS
ကျွန်ုပ်တို့၏ Rappitenderos သင်ယူသည်အစဉ်အမြဲဆန္ဒရှိအစေခံရန်စွမ်းအင်နှင့်အလိုဆန္ဒတွေအများကြီးနဲ့အတူယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ သင်တစ်ဦးပြုံးနေခြင်းနှင့်ကြင်နာမှုလူတစ်ဦး၏အပြည့်အဝပေးရန်သင့်တံခါးနားမှာစောင့်ဆိုင်းနေသူတစ်ဦးအမိန့်လုပ်တိုင်း။
ကျနော်တို့ဘိုဂိုတာ, Barranquilla, Medellin နှင့်မက္ကစီကိုစီးတီး၌သင်တို့အစေခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ
Rappi အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Rappi အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Rappi အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Rappi အား အခ်က္ျပပါ
app အတု 12
rikrdobalaio စတိုး 1.26k 517.84k
Rappi ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Rappi အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.12.20181215-1222
ထုတ်လုပ်သူ Grability Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://grability.rappi.com/api/termsconditions
လက်မှတ် SHA1: B1:FF:C2:6A:89:39:66:31:77:87:22:8E:EF:FF:D6:79:BF:E5:EF:89
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rappi
Rappi APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ